August 2019 | Myanmar Retailers Association
မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအသင်းကြီး၏ ဆဌမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အသင်းသားစုံညီအစည်းအဝေးပွဲကြီး
မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအသင်းကြီး၏ ဆဌမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အသင်းသားစုံညီအစည်းအဝေးပွဲကြီးကို ၉.၈.၂၀၁၉ရက်နေ့က UMFCCI ရှိ MMRA ရုံးတွင် အသင်းသားများ စုံညီစွာဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
AYA Bank နှင့် Myanmar Retailers Association (MMRA) တို့ နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနား
Myanmar Retailers Association (MMRA)၏ ၂၀၁၉-၂၀ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဧရာဝတီဘဏ်မှ Official Financial Partner အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည့် အကြောင်း နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၆)ရက်နေ့ ညနေ (၂)နာရီတွင် AYA Bank (River View Condo) ၌ ကျင်းပခဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အခမ်းအနားတွင် ဧရာဝတီဘဏ်မှ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးမြင့်ဇော်နှင့် MMRA ၏ ဥက္ကဌ ဦးသူရိန်ငြိမ်းတို့မှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး ဧရာဝတီဘဏ်မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ MMRA မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဆဌမအကြိမ်မြောက် Myanmar FoodBev နှင့် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် Myanmar Retail Sourcing Expo 2019 ပွဲအခမ်းအနား
Myanmar Retail Sourcing Expo သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ အရောင်းဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များကို ဆိုင်ခန်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်မှု နည်းပညာများ၊ အရောင်းဆိုင်ခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ ပရိဘောဂနှင့် ဆိုင်များသို့ အရောင်းကုန်ဖြည့်တင်းခြင်းများ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးသော လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံချိတ်ဆက်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ကုမ္ပဏီနှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် ပါဝင်ပြခဲ့ပြီး ။ဤပြပွဲကြီးသည် ထွန်းကားလာသော မြန်မာ့စီးပွားရေးအတွက် ထူးခြားသော အခွင့်အလမ်းကောင်းများကို ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် ပွဲကြီးတစ်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
မြန်မာလက်လီရောင်းချသူများအသင်း (Myanmar Retailers Assiociation) မှ ကြီးမှူးဦးဆောင်ပြီး သြဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာတော့ ၁နာရီကနေ့၅ခွဲအထိ Business Matching ကို
အဆိုပါပွဲလေးမှာတော့ တက်ရောက်သူမျာနဲ့အတူသိလိုသမျှတွေကို အပြန်အလှန်မေးမြန်းဆွေးနွေးတဲ့ စကားဝိုင်ေးလးအနေဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့
"Panel Discussion : How Franchise Business Work” သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ (အချိန်- နံနက် ၁၀ နာရီမှ နေ့လည် ၁၂ နာရီထိ) ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါအခမ်းအနားမှာတော့ ဒီနေ့ခေတ် Retail Sector မှာ ပြောင်းလဲနေတဲ့ Trend တွေ ၊ ရင်ဆိုင်ရမဲ့ Challenge တွေအတွက် နယ်ပယ်အသီးသီးက အတွေ့အကြုံရင့် Industrial Expert တွေကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး မိမိတို့ နယ်ပယ်ဆိုင်ရာရှိ အသိအမြင်နှင့် အတွေ့အကြုံများကို Panel Discussion ပုံစံဖြင့် ဆွေးနွေးဖလှယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Director of retail banking at AYA Bank
Group Executive Director at TMW Enterprise Limited & Owner of MDS Myanmar
Executive Director at Pitichanthar
၄။ ဦးအောင်ဘိုဘို (Alvin BoBo)
General Manager, City Express
Moderator အဖြစ် ဦးအောင်ချစ်ခင်
Founder and Managing Director, Strategy First University
Editor-in-Chief, Putet Comics Weekly & Mobile Application တို့ကဟောပြောခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ လက်လီရောင်းချသူများအသင်းမှ ကြီးမှုးကျင်းပတဲ့ Introducing Modern Retail Workshop အခမ်းအနား
မြန်မာနိုင်ငံ လက်လီရောင်းချသူများအသင်းမှ ကြီးမှုးကျင်းပတဲ့
Introducing Modern Retail Workshop အခမ်းအနားကို သြဂုတ်လ ၁၄-၁၅
ရက်နေ့တွင် တောင်ကြီးမြို့မှ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အခမ်းအနားတွင် Strategy First University မှ ဆရာမ
ဒေါ်သော်တာထွေး က ဦးဆောင်ဆွေးနွေး သင်ပြပေးခဲ့ပြီး
သင်တန်းသား ဦးရေ ၂၅ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
သင်တန်းသားများ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသော ပြသနာများကို case study များဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပြသခဲ့ပြီး Retail Summit နဲ့ Retail Study Tour (outbound) ကိုလည်း မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံ လကျလီရောငျးခသြူမြားအသငျးမှ ကွီးမှုးကငျြးပတဲ့
Introducing Modern Retail Workshop အခမျးအနားကို သွဂုတျလ ၁၄-၁၅ ရကျနေ့
တှငျ တောငျကွီးမွို့မှ စညျကားသိုကျမွိုကျစှာ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။
အခမျးအနားတှငျ Strategy First University မှ ဆရာမ
ဒျေါသျောတာထှေး က ဦးဆောငျဆှေးနှေး သငျပွပေးခဲ့ပွီး
သငျတနျးသား ဦးရေ ၂၅ ဦး တကျရောကျခဲ့ပါတယျ။
သငျတနျးသားမြား လကျရှိရငျဆိုငျနရေသော ပွသနာမြားကို case study မြားဖွငျ့ နှိုငျးယှဉျပွသခဲ့ပွီး Retail Summit နဲ့ Retail Study Tour (outbound) ကိုလညျး မိတျဆကျပေးခဲ့ပါတယျ။
Panel Discussion : How Franchise Business Work”
We are happy to announce that we will also be havinga"Panel Discussion : How Franchise Business Work” organized by Myanmar Retailers Association on (10:00 - 12:00), 17th August 2019.
We are inviting experts from industry to share their knowledge about the everchanging trends in retail sector and experiences about the challenges they have faced.
1) U Thura Maung
2) Daw Khine Thit Lwin
3) Daw Nang Kalyar Win
4) Aung BoBo (Alvin BoBo)
As Moderator, U Aung Chit Khin
Editor-in-Chief, Putet Comics Weekly & Mobile Application
Everyone who are in retail business should attend and you can also participate by discussing the challenges you are facing in your business with the panelists.
Remark : Seminar will be conducted in Myanmar language.
As seats are limited, pre-registration is required.
You can pre-register (Admission: Free) by sending an email to varinthorn@icvex.com .
The 6th Myanmar FoodBev and 4th Myanmar Retail Sourcing Expo will be held in August. Ready to participate in the event happening on
Place - Tatmadaw Exhibition Hall, U Wisara Road, Yangon
Pre-Register now at http://www.myanmarfoodbev.com/visitoregis/
Effective Management Skill for Retail Service Certificate Awarding Ceremony
၂၈.၇.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် မြေနီကုန်း Strategy First တွင်ပြုလုပ်သည့် Effective Management Skill for Retail Service သင်တန်းတွင် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။